ပါရမီ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ပါရမီဆယ်ပါး မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ပါရမီ (သင်္သကရိုက်: Pāramitā) သည် မြင့်မြတ်သူတို့၏ လုပ်ငန်း (သို့) အထပ်ထပ်ဆည်းပူးထားသော အလေ့အကျင့် ဟူ၍ အနက်ရရှိသည်။ ဤ၌ "မြင့်မြတ်သောသူ" ဆိုသည်မှာ မိမိအကျိုးအတွက် ပဓာနမထား၊ အများအကျိုးအတွက် နှင့် သံသရာမှလွတ်မြောက်စေရန် လုပ်ဆောင်ကြသောသူများကို ဆိုလိုသည်။ မိမိအကျိုးအတွက် လောကကို အသုံးချသူများမဟုတ်ဘဲ လောကအကျိုးအတွက် မိမိကိုယ်ကို အသုံးချသူများဖြစ်ကြသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာအရ ပါရမီဆိုသည်မှာ မြင့်မြတ်သူတို့သာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြသော လုပ်ငန်းများကို ဆိုလိုသည်။ ထိုပါရမီများကို ဖြည့်သော (သို့) လုပ်ဆောင်သောသူအများ၌ ဂေါတမဗုဒ္ဓသည် စံပြုထိုက်သည်။ ဗုဒ္ဓအဖြစ်သို့မရောက်မီ ရှေးကာလဘဝတစ်ခုဖြစ်သော သုမေဓာရသေ့ဘဝက ဗျာဒိတ်ရသည်မှစ၍ နောက်ဆုံးဘဝ ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ မဟာပရိနိဗ္ဗာန်စံသည်အထိ ဆောင်ရွက်ချက်များ ပါဝင်လေသည်။
ထိုသို့သော လုပ်ငန်းများသည် အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သော်လည်း လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအားဖြင့် ဆယ်မျိုးသာ ပိုင်းခြားနိုင်သည်။ ဒါန၊ သီလ မှအစပြုပြီး ဥပေက္ခာအထိ ဆယ်ခုသော လုပ်ငန်းတာဝန်များဖြစ်ကြသည်။ ပါရမီတစ်ပါးကို နောက်ထပ်သုံးမျိုး ပြန်ခွဲနိုင်သည်။ မူလ ပါရမီ (ရိုးရိုး)၊ ဥပပါရမီ (ရိုးရိုးထက် ပိုသော)၊ ပရမတ္ထပါရမီ (မြတ်သော၊ အမြတ်ဆုံးသော) ဟူ၍ တစ်ပါးကို သုံးခုထပ်မံခွဲခြားသောကြောင့် ပါရမီဆယ်ပါး၊ အကျယ်အနေဖြင့် သုံးဆယ်ဖြစ်သည်။
၂ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၃ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ
ပါရမီ သည် ပါဠိဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်၍ မြန်မာဘာသာစကားတွင်လည်း ထိုစကားလုံးကို မူရင်းအတိုင်းသုံးစွဲကြသည်။ တိပိဋကဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တဿရာဘိဝံသရေးသားပြုစုသော မဟာဗုဒ္ဓဝင်၊ ပထမတွဲ၏ အနုဒီပနီအခန်းတွင် ပါရမီကို အကျယ်ရှင်းလင်းထပ်မံဖွင့်ဆိုထားသည်။ ဒါန၊ သီလ ... ဥပေက္ခာ စသည့်တရား ဆယ်ပါးကို ပါရမီခေါ်ကြောင်း၊ ဤဆယ်ပါးကို ပြုမူဆောင်ရွက်ကြသော ဘုရားလောင်းများသည် လွန်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ် (ပရမ) ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြားသူ မြင်သူများက ဤသူသည် "ဘုရားလောင်း" ဟူ၍ အသိဉာဏ်နှင့် အသံ နှစ်ပါးဖြစ်သည့် ပရမာနံ ဘာဝေါ ကိုအနက်ယူ၍ ပါရမီ ဟုမည်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ပရမာနံ ကမ္မံ ကိုအနက်ကောက်၍လည်း ဘုရားလောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်သော ဒါန၊ သီလ စသည့်ဆယ်ပါးကို ပါရမီခေါ်ဆိုကြောင်း ရှင်းလင်းဖွဲ့ဆိုထားသည်။
သင်္သကရိုက်ဘာသာအားဖြင့် ပါရမီတာ ဟူ၍ သုံးနှုန်းသည်။ ယင်းပါဠိစကားလုံးကို လက်တင်အက္ခရာဖြင့် ဖလှယ်ပါက pāramī ဟူ၍ရပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသို့ ပြန်ဆိုရာတွင် perfection ဆိုသော ဝေါဟာရဖြင့် ပြန်ဆိုမှုများသည်။ ဦးဟုတ်စိန်၏ ပါဠိ-မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်တွင် ပါရမီကို ပရမ နှင့် ဏီ ကိုပေါင်းစပ်ပြထား၍ အနက်ကို "အထွတ်အမြတ်၊ မြတ်သောသူ၏ အဖြစ်" ဟူ၍ ပေးထားလေသည်။ မဟာယာန၊ ဝဇီရာရာမ ဗုဒ္ဓဘာသာများတွင် သက္ကတဝေါဟာရအတိုင်း ပါရမီတာ (Pāramitā) ဟူ၍ သုံးစွဲကြသည်။
ထေရဝါဒပိဋကတ်များ၌ ပါရမီများကို အမျိုးအမည်အားဖြင့် ဆယ်မျိုးသတ်မှတ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ :
ဒါန ပါရမီ= ပေးကမ်းစွန့်ကြဲလှူဒါန်းမှု (သို့) စွန့်လွှတ်ခြင်း။
သီလ ပါရမီ= ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းခြင်း။
နိက္ခမ ပါရမီ= တပ်မက်မှုကင်းခြင်း။
ပညာ ပါရမီ= အမှန်တိုင်းသိခြင်း
ဝီရိယ ပါရမီ= ဇွဲလုံ့လကြီးခြင်း။
ခန္တီ ပါရမီ= သည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်း။
သစ္စာ ပါရမီ= မှန်ကန်ခြင်း။
အဓိဋ္ဌာန ပါရမီ= ခိုင်မာသော ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိခြင်း။
မေတ္တာ ပါရမီ= သူတပါးအကျိုးစီးပွားကို လိုလားခြင်း။ မေတ္တာထားခြင်း။
ဥပေက္ခာ ပါရမီ= ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း၊ ဆင်းရဲ ချမ်းသာကို ဂရုမထားဘဲ သင့်တင့်စွာ ဆင်ခြင်ခြင်း၊
ပါရမီများကို ယေဘုယျအားဖြင့် ဘုရားလောင်းကျင့်စဉ် ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။ မြင့်မြတ်သူတို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ထိုသူများ၌ ကိလေသာအာသဝေါကုန်ခမ်းသော ပုဂ္ဂိုလ်များသာမက ထိုသို့ကိလေသာကုန်စင်စေရန် အားထုတ်နေသောသူများကိုလည်း ဆိုလိုသည်။ ထိုပါရမီများကို အမြင့်ဆုံးနေရာ၌ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားသည် စံဖြစ်၏။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကလျာဏပုထုစဉ်အဆင့်မှနေ၍ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအထိရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ အားလုံးသည် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရား၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ၌ ပါဝင်နေကြသည်။
ပါရမီလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါရမီမြောက်ခြင်း၊ မမြောက်ခြင်းရှိသည်။ ဤတိုင်းတာမှုကို အဓိကအားဖြင့် အင်္ဂါနှစ်ရပ်အပေါ်တွင် အခြေခံနိုင်သည်။ ကရုဏာရှိခြင်းနှင့် သံသရာမှလွတ်မြောက်ရန် ရည်မှန်းချက်ရှိခြင်းဖြစ်၏။ ပထမအင်္ဂါရပ်တွင် ကိုယ်ကျိုးကိုအဓိကမထားဘဲ သူတစ်ပါး၊ အများအကျိုး အတွက်ဟူသော စိတ်စေတနာနှင့်လူပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အတ္တသင်္ဂဟ ဟုခေါ်ဆိုသော မိမိကိုယ်သာ ချီးမြှောက်ခြင်းဖြင့် ငါ[မှတ်စု ၁] ကောင်းစားရေးအတွက် လုပ်ဆောင်သည်မျိုးမဟုတ်ပေ။ လောကသင်္ဂဟဟုတွင်သော လောကကို ချီးမြှောက်ခြင်းဖြင့် တစ်လောကလုံးကောင်းစားရေးဟူသည့် စိတ်စေတနာဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါမှ ပါရမီပြည့်မြောက်သည်။ ဤမှသာ မြင့်မြတ်သူတို့၏ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပေမည်။
သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်အောင် လောကအကျိုးဆောင်သောသူသည် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်၍ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ၊ မဟာသာဝက ဖြစ်နိုင်စေရန် လောကကိုသယ်ပိုး ဆောင်ရွက်သူများသည် ပစ္စေကဗုဒ္ဓ၊ မဟာသာဝကများဖြစ်မည်။ ထို့အတူ ပကတိသာဝကအဖြစ်သို့ ရောက်အောင် လောကကောင်းကျိုးပြုသူများသည်လည်း ပကတိသာဝကဖြစ်မည်ဖြစ်၏။ ဤသည်မှာ လောကဓမ္မ၏ အကြောင်းအကျိုးများပင်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ အကြောင်းရှိလျှင် ဤသို့အကျိုးရမည်ဖြစ်သည်။ ပါရမီကို မြင့်မြတ်သူတို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်၊ ကျင့်စဉ်ဟုဆိုရာ မမြင့်မြတ်သူများသည် သူတစ်ပါးက မိမိထက်သာမည်ကို စိုးရိမ်၊ မနာလို၊ ဝန်တိုဖြစ်သော်လည်း မြင့်မြတ်သူများက သူတစ်ပါး လက်ရှိအနေအထားမှ နိမ့်ကျသွားမည်ကို စိုးရိမ်ကာ မိမိထက်သာသွားလျှင် ဝမ်းမြောက်၊ ချီးကျူးကြသည်။
ပါရမီများကို အမည်အားဖြင့် ဆယ်ခု သတ်မှတ်ထားရာ ဥပမာအနေဖြင့် ဒါနပါရမီ၌ "သား၊ မယား၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ စွန့်လွှတ်ပါက ဒါနပါရမီ (ရိုးရိုး)၊ မိမိကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းကို စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံပါလျှင် ဒါနဥပပါရမီ၊ အသက်ကိုပင် စတေးစွန့်လွှတ်သောအခါ ဒါန ပရမတ္ထပါရမီ ဟူ၍ ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
မဟာယာနတွင် ပါရမီ ကို ပါရမီတာ အသုံးနှုန်းဖြင့် သုံးစွဲသည်။ ဘာသာရေးရာ ပညာရှင် ဒေးလ် အက်စ် ရိုက်က မဟာယာနကျမ်းစာများတွင်လည်း ပါရမီတာ ကို ဗောဓိဉာဏ်ရရှိရန် အခြေခံကျင့်စဉ်များအဖြစ် ရည်ညွှန်းထားကြောင်းဆိုသည်။ ပါရမီတာများသည် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ စံပြကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ပြည့်ဝခိုင်မာသောစံပုံရိပ်တစ်ခုကို အထောက်အပံ့ပြုရန်နှင့် ကိုယ်တိုင်ပြုစုပျိုးထောင်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်ဟူ၍ ရိုက်ကပင် ထိုသို့ဖော်ပြထားသည်။
မဟာယာနကျမ်းလာ ပညာပါရမီတာသုတ္တံ (Prajñapāramitā sūtras; प्रज्ञापारमिता सूत्र) နှင့် အခြားများစွာသော မဟာယာနကျမ်းစာများ၌ ပါရမီ (ပါရမီတာ) ခြောက်ပါးကို ဖော်ပြထားသည်။
ဒါနပါရမီတာ (दान पारमिता)
သီလပါရမီတာ (शील पारमिता)
ခန္တီပါရမီတာ (क्षांति पारमिता)
ဝီရိယပါရမီတာ (वीर्य पारमिता)
ဈာန (ဈာန်) ပါရမီတာ (ध्यान पारमिता)
ပညာပါရမီတာ (प्रज्ञा पारमिता) စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။
ဤစာရင်းကို ထေရဝါဒအဋ္ဌကထာရေးသူ အရှင် ဓမ္မပါလကလည်း ဖော်ပြထားမှုရှိရာ အရှင်ဓမ္မပါလက ထေရဝါဒ၏ ပါရမီဆယ်ပါး၏ အမျိုးအစားခွဲခြားမှုကို ထုတ်ဖော်ထားသည်။ အရှင်ဓမ္မပါလအရဆိုလျှင် သစ္စာကို သီလနှင့် ပညာဟု ခွဲခြားဖော်ပြပြီး မေတ္တာနှင့် ဥပေက္ခာကို ဈာနဟူ၍ ဖော်ပြသည်။ အဓိဋ္ဌာန (အဓိဋ္ဌာန်) သည် ထိုခြောက်ခု အတွင်း၌ဝင်သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဘိက္ခုဗောဓိက ဤဆယ်ပါးနှင့် ခြောက်ပါး ဆက်စပ်မှုသည် ထေရဝါဒနှင့် မဟာယာနဂိုဏ်များမကွဲခင် တူညီသော ဘုံတစ်ခုရှိခဲ့သည်ဆိုကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ဆယ်ဆင့်သုတ္တံ (Ten Stages Sutra) ၌ နောက်ထပ်လေးခုကို စာရင်းပြုစုထား၏။
ဥပါယ (ဥပါယ်) ပါရမီတာ (उपाय पारमिता)
ပန္နိဓါန ပါရမီတာ (राणिधान पारमिता) (အဓိဋ္ဌာန်ကဲ့သို့)
ဘာလပါရမီနာ (बल पारमिता)
ဉာဏပါရမီတာ (ज्ञान पारमिता)
မဟာရနာကုတသုတ္တံ (महारत्नकूट सूत्) တွင် ဤ၌ပါသော ပါရမီနာ လေးမျိုးကို ဖော်ပြထား၍ အမှတ် ၈ နှင့် ၉ သည် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေ၏။
↑ ဤ၌ "ငါ" သည် တစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက် စသော အရေအတွက်ပေါ်အခြေမခံဘဲ ငါ၊ ငါ့မိသားစု၊ ငါ့အုပ်စု၊ ငါ့နိုင်ငံ စသော အရည်အချင်းအပေါ်တွင် အခြေခံ၏။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ဦးရွှေအောင် (မဟာဝိဇ္ဇာ) (၂၀၀၃)။ လောကသားတို့၏ အနှိုင်းမဲ့ကျေးဇူးရှင် (ကိုယ်ကျင့်ဗုဒ္ဓဝင်)။ ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်။ p. ၇၂-။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ တိပိဋကဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တဿရာဘိဝံသ (၂၀၁၁)။ နိုင်ငံတော် သာသန မဟာဗုဒ္ဓဝင် (ပထမတွဲ၊ ပထမပိုင်း)။ သာသနာရေးဦးစီးဌာန။
↑ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်-ပါဠိ အဘိဓာန်၊ ဦးဟုတ်စိန်
↑ www.wisdomlib.org (2008-06-01)။ Paramita, Pāramitā, Pāramita: 12 definitions။
↑ Wright၊ Dale Stuart (2009)။ The Six Perfections: Buddhism and the Cultivation of Character (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Oxford University Press။ pp. 3–4။ ISBN 978-0-19-538201-3။
↑ Wright၊ Dale Stuart (2009)။ The Six Perfections: Buddhism and the Cultivation of Character (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Oxford University Press။ pp. contents။ ISBN 978-0-19-538201-3။
↑ ၈.၀ ၈.၁ Bodhi၊ Bhikkhu (2007-12-01)။ The Discourse on the All-embracing Net of Views: The Brahmajāla Sutta and Its Commentaries (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Buddhist Publication Society။ p. 300။ ISBN 978-955-24-0052-0။
↑ Bodhi၊ Bhikkhu (2007-12-01)။ The Discourse on the All-embracing Net of Views: The Brahmajāla Sutta and Its Commentaries (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Buddhist Publication Society။ p. 44။ ISBN 978-955-24-0052-0။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပါရမီ&oldid=706466" မှ ရယူရန်
၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။